सावधान ! विवाहित महिलाले भुलेर पनि प्रयाेग नगर्नुहोस् यस्तो सिन्दुर ! पतिको जीवनमा आइपर्छ ठूलो संकट ! – Medianp
सावधान ! विवाहित महिलाले भुलेर पनि प्रयाेग नगर्नुहोस् यस्तो सिन्दुर ! पतिको जीवनमा आइपर्छ ठूलो संकट !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २५, २०७५१२:५३0
काठमाडौँ,२५ पुस । हिन्दु धर्ममा विवाहित महिलाहरुको लागि सिन्दुर निकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । हिन्दुधर्ममा विवाहित महिलाले सिन्दुर नलगाए अशुभ हुन्छ भन्ने चलन रहेको छ । प्राय विवाहित महिलाले हरेक दिन सिन्दुर लगाएर हिड्ने गर्छन् । तर सिन्दुर लगाउँदा पनि विशेष रुपमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
शास्त्रमा उल्लेख भएका नियमहरुको पालना नगर्दा पतिको धनसम्पति नाश हुनुको साथै जीवनमा ठूलो संकटहरु आइपर्ने भएकाले सिन्दुर लगाउन नियमहरु पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ । आज हामी तपाईलाई तीनै नियमको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
१.अन्य महिलाले प्रयोग गरेर सिन्दुर लगाउनु हुँदैन् । यसो गर्दा जीवनमा धेरै समस्याहरु आउने भएकाले आफुले सोचेजस्तो सफलता हात पार्न नसकिने मान्यता रहेको छ ।
२.आफ्नो पति बाहेक अन्य ब्यक्तिले दिएको सिन्दुर लगाउनु हुँदैन् । अन्य ब्यक्तिले किनेर ल्याएको सिन्दुरले ठूलो हुने भूल हुने भएकाले पतिको जीवनमा समेत नराम्रो असर पर्ने र धन सम्पति आर्जनमा नष्ट हुने आर्थिक समस्या बढ्दै जाने विश्वास रहेको छ ।
३.कुनै ब्यक्तिले उपहार स्वरुप दिएको सिन्दुर मनमा ोट नपुगोस भनेर राख्नु स्वाभाविक हो तर त्यस्तो सिन्दुर लगाउनु हुँदैन् । त्यस्तो सिन्दुर लगाउँदा पतिसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा समेत अवरोध आउन सक्छ ।
फेसबुकमार्फत चिनजान गरी जागिर लगाइदिने भन्दै बलात्कार
कोमल वलीले सरकारलाई सोधिन्, किन अहिलेसम्म रामबहादुर बम्जनलाई पक्राउ नगरेको ?
सुखी र खुसी भविष्य निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने बुझिराख्नुहोस् यी कुरा ! सफल हुनेछ जीवन !
एयरपोर्टमा बच्चा छुटेपछि उडिसकेको विमान बिच बाटोबाटै फर्कियो